Umshini Wekhofi Burr China Manufacturers & Suppliers & Factory
Umshini Wekhofi Burr - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Umshini Wekhofi Burr)
Min. I-oda: 2000 Set/Sets
I-Alumina blaamic blade for coffee maker yenziwe ngamaphesenti angu-95 aluminium oxide. Inzuzo enkulu kakhulu ye-alumina blaam blade inomsebenzi wesikhathi eside futhi ukuziphatha okuphansi kwe-thermal kunezinsimbi. Kuzokwenza umshini wekhofi ube nokuphila isikhathi eside. Kungaletha ukunambitheka okuhlukile kwekhofi...